Miedzo inosimbisa kuti itsva iPad Air ine kuita kwakafanana neiyo iPad Pro | Nhau dze iPhone
Vamwe misikanzwa vakatenda kuti M1 processor iyo inokwidza iyo itsva iPad Air ingave "yakakandwa" kupa kushoma kuita pane iyo nyowani iPad Pro iyo inosanganisira yakafanana M1 processor. Bva, vakanga vasina kururama zvikuru.
Iwo ekutanga mayuniti eiyo itsva iPad Air ave kutosvika kune vatengi vawo, uye vakashaya nguva yekumhanyisa bvunzo Geek Bhenji 5 uye buritsa zvawawana. Mamwe manhamba akafanana neiyo iPad Pro M1.
Vari kutotanga kuona zvibodzwa icho chitsva iPad Air yakawanikwa neinozivikanwa Geekbench performance test application application.
Ivo vanoisa yakafanana M1 processor
Izvi zvinoreva, pasina kupokana, kuti Apple haina kudzikisa wachi yekumhanya kweM1 inokwira iyo iPad Air, ichienzaniswa neiyo iPad Pro. Ose anoshanda panguva imwe chete: 3,2 GHz Saka iwo mamodheru maviri ane maitiro akafanana.
Data rakaburitswa rinoratidza kuti iyo iPad Air M1 ine avhareji imwe-musimboti uye akawanda-musimboti mamakisi anosvika 1.700 uye 7.200, zvichiteerana. Izvi zvibodzwa zvinosimbisa kuti iyo iPad Air M1 ine zvakafanana kuita iyo yePadad Pro M1, ichiri 60% uye 70% nekukurumidza kupfuura chizvarwa chechina iPad Air ine A14 Bionic processor.
Kutanga kuunzwa mukutanga Apple Silicon, (muMacBook Air, 13-inch MacBook Pro, uye Mac mini muna Mbudzi 2020), iyo M1 chip inoratidzira 8-core CPU, 8-core GPU, uye yepamusoro-inoshanda Neural Injini. 16 cores. Iyo processor inopa iyo itsva iPad Air kupinda 8 GB ndangariro dzakabatana.
Uye yakatanga kuiswa muPad mune yazvino iPad Pro. Uye nekupihwa simba rayo rakakura rekugadzirisa, zvanga zvichifungidzirwa kuti pamwe yakanzi M1 processor ingadai "yakagadziridzwa" kuitira kuti kuita kwayo kurege kufanana muPad yakachipa senge iyo itsva iPad Air. Zvakanaka, izvi hazvina kuitika, sezvakaratidzwa neGekkbench zvibodzwa, zvakafanana mumamodeli ese ari maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Miedzo inosimbisa kuti itsva iPad Air ine maitiro akafanana neiyo iPad Pro
Eufy RoboVac G20 Hybrid, ine simba uye yakaderera ruzha
Iyo CAD faira yeramangwana iPhone 14 Pro yakaburitswa